Waa Kuma Hogaamiyaha Magaciisu Ku Xardhan Yahay Colaada Itoobiya? | Kaafi News
Waa Kuma Hogaamiyaha Magaciisu Ku Xardhan Yahay Colaada Itoobiya?
Wuxu ahaa dagaal yahan hore oo jabhad ah oo ka jara ciidamada Itoobiya isgaadhsiinta, Debretsion Gebremichael haatanna wuxuu horseed ka yahay dagaal lagaga soo horjeedo xukuumadda Ra’isal Wasaare Abiy Ahmed oo ay ku diririyaan gacan ku haynta gobolka woqooyi ee Tigray oo lagu tilmaamay “ubucda” qarankaas.
Debrestion waa hogaamiyaha xisbiga Tigray People’s Libration Front (TPLF) ee ka taliya gobolka Tigray ee ay sida lama filaanka ah isku seegeen Abiy.
Isaga oo markaas uun guursaday oo ilmo yar dhalay, ayaa Debretsion ka tagay waxbarashadiisii jaamacadda Addis Ababa 1970-aadkii oo uu ku biiray TPFL si uu uga qayb galo dagaalkii 17 sannadood socday ee ururku kula jiray xukunkii Derg-iga ee hogaamiyihii Maarkisiga ahaa ee Mengistu Haile Mariam.
Wuxuu wasiir ka noqday xukuumadda markii talada laga tuuray Derg-gii ee talada ay qabteen isbahaysi xisbiyo TPLF awoodda ugu badan ku lahayd wixii ka horeeyey intaa Abi hogaanka la wareegin 2018.
Saaxiibkii oo ay aad iskugu dhaw yihiin jaalna ahaayeen oo la yidhaa Alemayehu Gezahegn ayaa sheegay in markii labadooduba ay tababar milatari ku dhamaysteen dhulka buuraleyda ah ee Tigray, uu ogaaday kartida farsamo ee saaxiibkii oo isna kula taliyey taliskii TPLF in Debretsion lagu daro ururka “farsamada”.
XIGASHADA SAWIRKA,TPLF MUSEUM
Qoraalka sawirka,Debretsion wuxuu gacan weyn ku lahaa aasaaskii idaacadda TPLF
Alemayehu waxay la ahayd arin maal gal ah in Debretsion lagu daro ururkaas maadama oo uu ahaa qof maskax badan laakiin afgaaban oo “ciyaalo magaalo ah” kuna kacaamay Shire oo haatan ay guul darro wayni ka soo gaadhay hogaamiyaha Tigray maadaama ay ciidamada federaalku ka gacanta ku dhigeen magaaladaas.
‘Biraha la tuuro ayuu koronto ka dhalin jiray’
Wuxuu ka dhashay qoys Masiixiyiin Orthodox ah, waxaana loo bixiyey Derbretsion oo macnihiisu yahay Buurta Zion, halka magaca aabihiina yahay Gebremichael oo macnihiisu yahay adoonkii weliga la yidhaa Michael.
“Markuu dugsiga hoose ku jiray wuxuu soo urursan jiray baytariyad la daadiyo, raadyowyada iyo qalabka elektarooniga ah ee la tuuro markaasuu hagaajin jiray. Iyada oo aan magaaladooduba lahayn laydh ayuu gurigooda u sameeyay laydh koronto ku shaqeeya” ayuu yidhi Alemayehu oo waayadaa hore xusuusani.
Dagaalka Itoobiya: Sawiro iyo muuqaalo been abuur ah oo ay dad badan run u qaateen
Qoraalka Muuqaalka,Ethiopia: Four things you need to know about the Tigray crisis
Debretsion wuu ka soo dhalaalay “qaybtii farsamada” TPLF ee lagu daray, waxaanu door muhiim ah ka ciyaaray dhismaha awoodda sirdoonka TPLF ee dhegaysiga qalabka isgaadhsiinta ee ciidamadii Itoobiya iyo sidoo kale in la jaro isgaadhsiintooda taarka.
“Arintaasi waxay noo sahashay in aan guulaysano, sababta oo ah dagaalyahannadii xorriyad u dirirka TPLF waxay ka war heli jireen dhaqdhaqaqa ciidanka Itoobiya intaanay hawl gal ba bilaabin, marka taarkooda isgaadhsiinta aanu jarno na may wada xidhiidhi kari jirin marka weerarrada lagu qaado” ayuu yidhi Alemayehu.
Si uu xirfadiisa u sii kobciyo, Debretsion wuxuu Talyaaniga ku tagay baasaboor foorjari ah markuu soo noqday na wuxuu dhisay idaacaddii ugu horaysay ee TPLF yeelato oo la yidhaa Dimtsi Weyane oo macnaheedu yahay Codka Kacaanka.
‘Gebi uu ka dhacay buu ku dhiman gaadhay’
Nin kale oo ka tirsan dagaalyahannadii jabhadda TPLF oo la yidhaa Measho Gebrekidan, ayaa isna xusuusan siday habeenkii buuraha u fuuli jieen marka ay ogaadaan in aan basaasiinta dawladdu arkayn si ay buurahaa dushooda ugu soo rakibaan anteenooyin.
“Habeen ayuu gebi ka dhacay, aniga iyo jaalle kale ayaa noloshiisa badbaadinay. Waxaan had iyo goor is weydiiyaa haduu dhiman lahaa maxaa dhici lahaa, idaacaddaasi ma hir geli lahayd?” ayuu yidhi Measho.
Haatan Dimtsi Weyane waxay qayb ka tahay warbaahin afaf badan ku hadasha oo xarunteedu tahay magaalo madaxda Tigray ee Mekelle, waxay baahisaa warbixinaha ay TPLF ka soo saarto iska hor imaadka milateri ee dhex maraya dawladda federaalka ah.
Idaacaddaasi waxay tan iyo intii colaaddu bilaabantahay baahinaysay faalooyin aad u dhaliilaya Abiy, mawjadaha Idaacadaasi ka hadasho ayaa la xidhay laakiin Dimtsi Weyane maalin ka dib ba hawada ayay ku soo noqotay.
Abiy ayuu kula loolamayey xilka ra’isal wasaarenimo
Debretsion iyo Abiy waxaad moodaysay in ay saaxiibo yihiin bilowgii markii ra’isal wasaaruhu xilka qabtay 2018. Hogaamiyahan Tigray xataa wuxuu abaabulay xaflad farxad iyo raynrayni ka muuqato oo lagu soo dhawaynayo ra’isal wasaaraha oo ka dhacday Mekelle.
“Tigray waa halka taariikhda dalkeena samaysa, waa gobolkii lagu jabiyey shisheeyihii soo duulay [ oo ay ku jiraan Talyaaniga iyo Masaaridu”. Itoobiyadan casriga ahna waa ubucdeeda” ayuu yidhi Abiy 2018.
Debretsion na dhankiisa wuxuu amaanay dadaalka nabadda ee ra’isal wasaaruhu la bilaabay madaxweynaha Eritrea, Isaias Afwerki, ee lagu soo af-jarayey xaaladdii “nabad iyo colaadtoona” aan ahayn ee dhex taalay labada dal tan iyo dhamaadkii dagaalkii ay xadka isku laayeen ee 1998-2000.
XIGASHADA SAWIRKA,TIGRAY PRESIDENT’S OFFICE
Qoraalka sawirka,Debretsion iyo Abiy
“[Abiy] wuxuu tagay Eritrea oo wuxuu la kulmay Isaias. Sannado badan arintan oo kale ma dhacdo ahay ahayd. Waa arin weyn sababta oo ah waxay fursad weyn u abuuraysaa dalka” ayuu yidhi Debretsion markii heshiiska la gaadhay.
Laakiin jaalnimadaa uu muujjiyey waxaad moodaysay in ay sheelaysay xiisad isa soo taraysa oo labada nin dhex taallay.
Debretsion wuxuu lahaa han ah inuu isagu noqdo ra’isal wasaaraha waxaa se kaga guulaystay Abiy doorasho uu qabtay isbahaysigii talada hayey 2018.
”Waxaan ku idhi: ‘nin aan bislayn baad tahay. Ma tihid musharax ku haboon xilka” ayuu yidhi Debretsion oo waraysi siiyey wargeyska Ingiriiska ka soo baxa ee Financial Times sannadkii 2019.
Laakiin in lagaga adkaado doorashadaasi layaab kuma ay ahayn dadka, maadaama oo TPLF ay noqotay wax ku sidkan cabudhinta iyo musuqmaasuq 27 kii sannadood ee ay siyaasadda dalka awoodda ku lahayd.
‘Dagaalkani waa masiibo’
Laakiin haatan wuxuu gunta ugu jiraan colaad la sheegay in ay ku dhinteen boqolaal qof oo ay ku baro kaceen 30,000 oo qof oo u tallabay dalka deriska la ah ee Sudan sidoo kalena dhaawacay kaabayaashii dhaqaalaha ee muhiimka ahaa – wadooyinka iyo dhismayaasha- gobolkaas oo sida Qaramada Midoobay sheegtay ah ka saboolnimadu ugu badan tahay Itoobiya.
”Debretsion dagaalkan masiibo ayuu u arkaa” ayuu yidhi Dade Desta oo ah khabiir ku takhusay siyaasadda oo fadhigiisu yahay Maraykanka
Laakiin wuxuu filayey in TPLF si adag uga soo horjeedsanayso isku dayada Abiy ee ah in maamul cusub loo dhiso Tigray.
Abiy Axmed: Howlgalka militeri ee ka dhanka ah Tigreega wuu guuleystay
”TPLF waxay soo wada dagaalameen Eritrea oo waxay halgan kaga soo wada horjedeen xukunkii Derg-giga oo waayo aragnimo dheer ayay u leeyihiin dagaalka. Laakiin dagaalku sidiisaba wuxuu u baahan yahay dad u heelan in ay dagaalamaan waana wax ka jira arintaasi gobolka Tigray” ayuu yidhi Dade oo odorosaya in colaadu daba dheeraan karto.
Hase yeeshee, Abiy ayaa qudhiisu kalsooni ku qaba inuu ka adkaan karo TPLF oo uu Debretion, oo lagu soo oogay eedo khiyaamo qaran ah iyo dastuurka oo uu ku tuntay, uu horkeeni doono caddaaladda.